မောင်မောင် လက်ရှိ တက်ရောက်နေသည်.ကျောင်းမှ မောင်မောင်တို. မြန်မာကျောင်းသားများသည် လပြည်.နေတိုင်းစုပေါင်းဘုရားရှိခိုးလေ.ရှိပါသည်။လက်ရှိပညာသင်ကြားနေသော တိုင်းပြည်သည် ဗုဒ္ဓဘာသာကိုအဓိကထားကိုးကွယ်သောနိုင်ငံမဟုတ်ပါ။ထို.အပြင်ထိုနိုင်ငံသားဗုဒ္ဓဘာသာဝင် များမှာလည်း အင်မတန်မှ ရှားပါးမယ်လို.ထင်ပါတယ်။ မောင်မောင် ငယ်စဉ်က ဖတ်ခဲ.ဘူး၊ကြားခဲ.ဘူးတာကတော. ကွန်မြူနစ်အယူအဆကိုလက်ခံကျင်.သုံးသောနိုင်ငံဖြစ်သောကြောင်.အများစုမှာဘာသာမဲ.များဖြစ်ကြတယ်လို. သိထားတယ်။ နောက်ပိုင်းမှ ဘဲ ခရစ်ယန် ဘာသာဝင် များ ရှိလာခဲ.တာပါ ။
ဒီနိုင်ငံမှာ ဘုရာ စေတီတည်ထားတာ ၊ တရားအားထုတ်နိုင်ရန် ဓမ္မာရုံလိုမျိုးနေရာ ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမရှိတော.ကိုယ်.အဆောင်တွေမှာဘဲဘုရားခန်းလေးကိုသက်သက်တစ်ခန်းလုပ်ထားပြီး ဘုရားရှိခိုးနိုင်အောင်စီစဉ်ထားကြတယ်။ဆင်းတုတော်ကိုတော. မြန်မာနိုင်ငံကနေ ပင်.ဆောင်လာတာပေါ.။ ခက်ခက်ခဲ.ခဲ.နှင်.ပင်.ဆောင်လာသူကိုလည်းကျေးဇူးတင်မဆံုးပါဘဲ။အချို.သောဆင်းတုတော်အသေးများကတော.
နောင်တော်ကြီးများ ကျောင်းပြီး၍ အမိမြေကို ပြန်ရာတွင်နောက်လူများ အတွက် လှူခဲ.ကြသည် များ ဖြစ်သည်။ ဘုရားခန်းလေးကတော.အိုအေးစစ်လေး တစ်ခုပါဘဲ ဘာသာတရားလိုက်စားလိုသူများအတွက်။
ဘုရားခန်းအတွက်ကိုကျောင်းသားများထည်းမှသင်.လျော်ရာကျောင်းသားနှစ်ဦးခန်.ကိုတာဝန်ပေးထားပါတယ်။ ဘုရားခန်း အဖွင်.အပိတ်နဲ. သန်.ရှင်းရေး စသည်ဖြင်.ပေါ.။ အခန်းကလည်း လုံသောကြောင်. အပြင်မှ ချက်ပြုတ်သံများစကားပြောသံများကိုတော်ရုံမကြားရပါဘူး။တရားထိုင်လိုသူများပုတီးစိတ်လိုသူများအတွက် အင်မတန်ကောင်းမွန်သောနေရာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားခန်းလေးထည်းမှာဘဲစာပေလေ.လာလိုက်စားလိုသူများအတွက် စာကြည်.တိုက် အသေးလေးကို ဖွင်.ထားသောကြောင်. ဘုရားလည်းဖူး ဗဟုသုတလည်း ရှာမှီးနိုင်တာပေါ.။ ကျနော်ကလည်း စာဖတ်ဝါသနာလည်းပါ ဘာသာရေးကိုလည်း သင်.တင်.သလောက်လိုက်စား သောကြောင်. ဒီဘုရားခန်းလေးကို နေ.စဉ်နီးပါးရောက်ဖြစ်တယ်။
ဘာသာရေးလိုက်စားတယ်ဆိုလို. သိပ်လည်းမထင်ပါနဲ.။ နေ.စဉ်ပုံမှန် ဘုရားရှိခိုး ကာ ဂုဏ်တော်ကိုးပါးကို ပုတီးစိတ် မေတ္တာသုတ် ရွတ် မေတ္တာပို. ဒီလောက်ပါဘဲ ။ နေ.တိုင်း မိနစ် ၃၀ တော. ဒီဘက်ကိုပေးထားပါတယ်။ အများကြီး မလုပ်နိုင်သေးပေမယ်. တတ်နိုင်သလောက်တော.လုပ်ပါတယ်။ အလုပ်များတဲ.နေ များမှာတော. မရောက်ဖြစ်ခဲ.တာတွေလည်း ရှိတာပေါ.။ နေ.စဉ်ဘုရား ရှိခိုးသူတွေနဲ. ဘုရားခန်းလေးက သက်ဝင်လှုပ်ရှားနေပါတယ်။ အင်မတန်မှ ငြိမ်းချမ်းတဲ.နေရာလေးပါ။ မိမိကိုယ်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို.ရာစိတ်ကိုပိုင်မှရမည်။ထိုစိတ်ကိုပြုပြင်နိုင်ဖို.ရာကတော.ဘာသာတရားသည်အကောင်းဆုံးသော လမ်းဖြစ်တယ်။တရားလေးထိုင်ပုတီးလေးစိတ်သောအခါမိမိစိတ်သည် တည်ငြိမ်ကာ အေးချမ်းနေပါတယ်။
စိတ်တည်ငြိမ်အောင်မိမိကိုယ်မိမိပြုပြင်နိုင်ပြီဆိုလျှင်မည်သည်.ကိစ္စလုပ်ငန်းမဆို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်လိမ်.မည်။ကျောင်းသားဆိုလည်းစိတ်ပျံ.နှံမှုမရှိဘဲစာကိုကြိုးစားနိုင်မည်။စာလုပ်နေရင်းနဲ.စိတ်ကဟိုရောက်လိုက် ဒီရောက်လိုက် နဲ. တော်တော်နဲ.စာကမရဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ငါ.က ဥာဏ်မကောင်းပါဘူး ဆိုပြီး စိတ်ဓါတ်တွေကျ ကာ မလုပ်ဖြစ်တော.ဘူး။ ဒီလိုနဲ.ဘဲ လမ်းတွေး မှားနေကြတာ အများကြီးပါ။ ဘုရားခန်းလေးအကြောင်းရေးမလို. ဘယ်တွေရောက်ကုန်ပြီလည်းမသိဘူး။ ဆက်ပြောအုန်းမယ် ။ လပြည်.နေ.ရောက်ပြီဆို ပထမဦးဆုံးမြန်မာတွေနေတဲ.အထက်တွေမှာ ကြေးစည်လေးကိုတည်းပြီး နှိုးဆော်
တဲ.အလုပ်ကို တော. ဘုရားခန်း တာဝန်ယူထားတဲ.ကျောင်းသားမှ လုပ်ပါတယ်။ ထို.နေ.မတိုင်မှီ မှာတော. သစ်သီးဆွမ်းကပ်ဖို.အတွက်ဈေးကို တာဝန်ကျတဲ. ကျောင်းသားသွားကာ လိုအပ်တာတွေ ဝယ်ရခြမ်းရ။
ည ကိုးနာရီ မှစပြီး ဘုရားခန်းထည်းသို. တစ်ဦး ပြီး တစ်ဦး ဝင်လာပြီ။ ကျနော.်အခန်းရှေ.က ကိုကျော်စွာတို.ဆို တစ်ခန်းလုံးနီးပါးကိုလာတာ။ ဘာသာတရားကို ကိုင်းရှိုင်းတယ်လို. ဆိုရမှာပေါ. ။ အများစုကတော. ပုံမှန်ဝင်နေကြလူများပါ။ တစ်ခါ တစ်ခါ မျက်စိလှည် ပြီးရောက်လာသောလူများလည်း ရှိသေးတယ်။ထိုလူများ ဘုရားရှိခိုးပြီးရင် မုန်.နဲ. အအေးတိုက်တာကို ပါဆယ်တောင်ဆွဲး သွားသေးတယ်။ ဘုရားလည်းဖူးလိပ်ဥပါတူးသွားတာပေါ.လို.ပြောရမလားဘုရားလည်းဖူးဗိုက်ပါဖြည်.သွားတယ်လို.ဆိုရမလား။
လူစုံပြီဆိုတာနဲ. ဆရာကိုနိုင်မင်းထွန်းမှ ဘုရားပင်.နတ်ပင်.ရွတ်ဖတ်ပူဇော်မှုနဲ. စတင်လိုက်ပါတယ်။ ညီညီညာညာနဲ.ဘုရားရှိခိုးသံလေးကပျံနှံ.လို.ပါဘဲ။နောက်ဆုံးဆုတောင်းအမျှဝေကာအဆုံးသတ်လိုက်သည်။
ပြီးရင်တော. အအေးနဲ. မုန်.ကို အလှူရှင် ကျောင်းသားမှ ဒါနပြုပါကာ ကျွေးတဲ.အစီအစဉ်ပါ။ ကျနော်တို.ကျောင်းရဲ.လပြည်.နေ.ပုံမှန် ပရိုဂရမ်လေးဘဲဖြစ်ပါတယ်။အိုအေစစ်ရဲ. အသာယာဆုံးအချိန်ပေါ.။
လူတိုင်းလူတိုင်း စစ်မှန်တဲ. အိုအေစစ်နေရာလေးတွေကို ရောက်နိုင်ကြပါစေ။
မောင်မောင် (၃၀ ၃ ၂၀၁၁)
Posted by မောင်မောင် at 20:50
1 April 2011 at 06:59